Ahoana ny fomba hanakanana ny hevitr'ireo mpampiasa hafa ao amin'ny Instagram | Androidsis
Ahoana ny fomba hanakanana ny hevitry ny mpampiasa ao amin'ny Instagram
Instagram dia fampiharana iray izay nampiditra asa vaovao marobe rehefa mandeha ny volana. Misaotra azy ireo fa ny mpampiasa ao amin'ny tambajotra sosialy malaza dia manana safidy maro kokoa. Afaka isika izao zahao ny fotoana ampiasainay izany isan'andro, amin'ny fomba tena tsotra. Ho fanampin'izany, manome safidy maro hanamboarana azy isika, na dia mamela antsika hisafidy ireo olona tsy tiantsika harahina aza.
Satria manome antsika ny fahaizana manaisotra ireo mpanaraka ny Instagram, araka izay efa nasehonay anao. Afaka manao an'izany koa isika misy ny olona tsy mahay manoratra hevitra ao amin'ireo lahatsoratra ampakarinay ao amin'ny tambajotra sosialy. Te hahafantatra ny fomba hahatratrarantsika an'ity ve ianao? Manazava izany aminao eto ambany izahay.
Voalohany aloha dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fikirakirana ny app isika. Mba hanaovana izany, ampidirintsika ny mombamomba ary tsindrio ireo dian-tsipika telo mitsivalana eo amin'ny faritra avaratra ambony amin'ny efijery. Ao anatin'ny sehatry ny Instagram, mila mitady faritra antsoina isika Fanaraha-maso.
Ity no fizarana mahaliana antsika. Ampidirinay izy avy eo ary jerena ny safidy voalohany miseho eo amin'ny efijery amin'ity fizarana ity. Fizarana iray milaza fa Manakana ny fanehoan-kevitra avy amin'ny ... Tsindrio ity safidy ity, hahafahanao manakana ny hevitry ny mpampiasa sasany amin'ny lahatsoratray.
Amin'ny efijery manaraka dia tsy maintsy ataontsika ampidiro ny anaran'ny mpampiasa Instagram izay fanehoan-kevitra tianay sakanana. Mety ho olona manaraka antsika na olona tsy manaraka antsika izany. Na dia amin'ity tranga ity aza dia misy dikany bebe kokoa fa avy amin'ny olona iray manaraka antsika amin'ny tambajotra sosialy.
Raha vao tafiditra ny anarana na ny anaran'ireo mpampiasa izahay dia afaka miala amin'ity fizarana ity. Amin'ireto dingana tsotra ireto dia nanohy nanakana ny hevitr'ireo olona ireo izahay tao amin'ny Instagram. Ity olona ity dia afaka manoratra amin'ireo hafatra apetrakao amin'ny tambajotra sosialy, fa izy ireo ihany no ho afaka mahita ireo fanehoan-kevitra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanakanana ny hevitry ny mpampiasa ao amin'ny Instagram
Ahoana ny fomba hamafana ireo fifandraisana WiFi izay voatahiry ao amin'ny Android